ရေချိုးခေါင်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ - သတင်း - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
တစ်နေကုန် အလုပ်ပြီးတာနဲ့ အိမ်ပြန်ဖို့ ပထမဆုံးအချက်က အေးအေးဆေးဆေး ရေချိုးဖို့ပါပဲ။ ရာသီဥတု ပိုပူလာတာနဲ့အမျှ ရေချိုးတာက ပိုမြန်ပြီး ပိုအဆင်ပြေတဲ့ ရေချိုးခန်းတွေကို အစားထိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ရေချိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရေချိုးတဲ့ Nozzle က အရမ်းအရေးကြီးပြီး ရေရုတ်တရက်စီးဆင်းနေတဲ့ ရေမချိုးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ မှန်းလို့မရပါဘူး။ အောက်ဖော်ပြပါသည် ရေချိုးခန်းသုံး ရေပိုက်ခေါင်းရွေးချယ်ခြင်းနည်းပညာကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။
1. ကိုကြည့်ပါ။ရေချိုးခန်း နော်ဇယ်spool
spool ၏အရည်အသွေးသည် ရေချိုးခန်း Nozzle ၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူသည့်အခါ၊ရေချိုးခန်း နော်ဇယ်၎င်း၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်အာရုံစိုက်ရပါမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကောင်းသောspool သည် ရေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်သည်။ အခန်းကဏ္ဍ။
coating ၏အရည်အသွေးရေချိုးခန်း နော်ဇယ်အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေရုံသာမက ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး သန့်ရှင်းရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ ပလပ်စတစ်ဖြင့် အုပ်ထားသော ရေဖျန်းကိရိယာများသည် စျေးပေါသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း တိုတောင်းပြီး ပါးစပ်ကို အလွယ်တကူ ပိတ်ဆို့နိုင်သောကြောင့် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးကို ကြီးမားသော ပြဿနာဖြစ်စေသည်။ Stainless Steel နှင့် Copper တို့သည် အတော်လေး ကောင်းမွန်ပါသည်။
အပြင်ဘက်မှ၊ နော်ဇယ်တစ်ခုစီ၏ ပုံသဏ္ဍာန်သည် တူညီနေသဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် ၎င်း၏ ရေထွက်ပေါက်နည်းလမ်းနှင့် spray effect ကိုကြည့်ရှုပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ရေချိုးသည့်အလေ့အထအရ သင့်လျော်သော နော်ဇယ်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ .
4. ရေချိုးခန်း Nozzle ၏ ပစ္စည်းကို ကြည့်ပါ။
ရေချိုးခန်း နော်ဇယ်များကို ပလပ်စတစ်၊ သံမဏိနှင့် ကြေးနီတို့ဖြင့် အဓိက ပြုလုပ်ထားသည်။ နှိုင်းရအားဖြင့်ပြောရလျှင် ပလပ်စတစ်ရေချိုးခန်းသုံး Nozzle များသည် ဈေးသက်သာသော်လည်း ချို့ယွင်းချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် တာရှည်ခံခြင်းမရှိ၊ အက်ကွဲလွယ်ပြီး ဘက်တီးရီးယားများနှင့် အညစ်အကြေးများ စုပုံလွယ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ခေတ်သစ်လူများ၏ လူနေမှုဘဝ အရည်အသွေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို လိုက်စားခြင်းတို့နှင့် မကိုက်ညီပါ။ စတီးလ်နှင့် ကြေးနီရေချိုးခေါင်းပေါက်များဆင်တူသော်လည်း ပြောရလျှင် သံမဏိရေချိုးခန်းသုံး နော်ဇယ်များသည် စျေးပိုသက်သာပြီး ကြေးနီရေချိုးခန်း နော်ဇယ်များသည် ပိုမိုခေတ်စားပြီး လေထုကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
လွန်ခဲ့သော:ပေါက်နေတဲ့ ရေချိုးခေါင်းကို ဘယ်လိုပြင်မလဲ။
နောက်တစ်ခု:Stainless Steel Shower Hose ရဲ့ သံချေးတက်ခြင်းကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။